सूर्यबहादुर सोम्याहाङ राई र जगतबहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार बस्नेत र चौहानलाई
पथरी, साउन १५
मोरङको पथरी घर भई हाल विदेशमा रहेका दुई युवाले स्थापना गरेको सूर्यबहादुर सोम्याहाङ राई र जगतबहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मोरङका दुई पत्रकारलाई प्रदान गरिने भएको छ।
नागरिक दैनिकका पत्रकार चुमन बस्नेत र पथरीकै रेडियो सिम्रिकका लोकबहादुर चौहानलाई जनही १०-१० हजार रूपैयाँ राशीको उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने भएको ‘स्व.सूर्य बहादुर सोम्याहाङ राई र स्व. जगत बहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’को अक्षयकोषका संयोजक गोपाल काफ्लेले जनाकारी दिए।
विदेशमा रहेका मोरङ पथरीका दुई युवाले पत्रकारिता पुरस्कारका लागि १ लाख रूपैयाँको अक्षयकोश स्थापना गरेका हुन्।
मनिष सम्बाहाम्फे र अजय शेन
अमेरिकामा रहेका अजय सेन र क्यानडामा रहेका मनिष सम्बाहाम्फेले ५०/५० हजार रकममा उक्त कोष स्थापना गरेका हुन्।
पथरी स्पोर्टिङ क्लबको मातहतमा रहने गरी स्थापित उक्त कोषबाट हरेक वर्ष मोरङ कार्यक्षेत्र बनाएर कलम चलाउने २ पत्रकारलाई ‘स्व.सूर्य बहादुर सोम्याहाङ राई र स्व. जगत बहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ दिइने भएको हो।
पथरीशनिश्चरे–१ का अजय सेनले आफ्ना हजुरबुवा स्व. सूर्य बहादुर सोम्याहाङ राई र पथरीशनिश्चरे–७ मा बसोबास गर्दै आएका हाल क्यानडामा रहेका मनिष सम्बाहाम्फेले आफ्नो बुवा स्व. जगत बहादुर सम्बाहाम्फेको स्मृतिमा सो पत्रकारिता पुस्कारको अक्षयकोषको स्थापना गरेका हुन्।
पथरी स्पोर्टिङ क्लबले गठन गरेको छनोट समितिबाट यसपटक दुई पत्रकारलाई सम्मान गर्न लागिएको हो। पुरस्कार शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘मोरङ च्यालेन्ज’को फाइनल अर्थात २० गते दिइने भएको छ।
अबदेखि कोषमा रहेको रकमको ब्याजबाट जति पैसा आउँछ त्यसलाई बराबर दुई जनालाई बाँढेर दिन लागिएकोको संयोजक काफ्लेले बताए। यसपटकको लागि भने पहिलो पटक भएकाले मनिष र अजय दुबैले पुरस्कार रकम दिएका हुन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन १५, २०७४ १२:०४:०३